Abakhiqizi nabahlinzeki bePlastiki Mirror & Abahlinzeki - China Ifektri Yesibuko Sepulasitiki
Isibuko se-Anti-Fog senzelwe ukumelana nenkungu ngaphansi kwezimo ezinzima kakhulu. Ngokuvamile kusetshenziswa izibuko zokushefa / zeshawa, izibuko zamazinyo, ne-sauna, izicelo zeklabhu yezempilo.
• Kutholakala ngogqinsi lokumelana nomhuzuko
• Kutholakala ngogqinsi luka-.039 ″ kuye .236 ″ (1 mm -6.0 mm)
Inikezwe nge-polyfilm, i-adhesive back kanye ne-masking yangokwezifiso
• Inketho yokunamathela yokukhipha ehlala isikhathi eside iyatholakala
Ishidi lesibuko lePolystyrene (PS) liyindlela ephumelelayo yokwenza isibuko sendabuko sicishe singaphukelwa futhi singasindi. Ilungele imisebenzi yezandla, ukwenza imodeli, ukwakheka kwangaphakathi, ifenisha njalonjalo.
• Kutholakala ngamashidi angama-48 ″ x 72 ″ (1220 * 1830 mm); ngokwezifiso osayizi etholakalayo
• Kutholakala ngogqinsi luka-.039 ″ kuye ku-.118 ″ (1.0 mm - 3.0 mm)
• Kunikezwe i-polyfilm noma i-papermask, i-adhesive back kanye ne-custom masking
Amashidi wePolycarbonate Mirror yizibuko ezinzima kunazo zonke ezitholakala emakethe. Ngenxa yamandla abo amangalisayo nokumelana nokuchoboza, cishe akunakuqhekeka. Ezinye izinzuzo zesibuko sethu se-PC amandla amakhulu anomthelela omkhulu, ukuqina, ukumelana nokushisa okuphezulu, ukucaciseleka nge-crystal nokuqina kobukhulu.
• Kutholakala ngogqinsi luka-.0098 ″ kuye ku .236 ″ (0.25 mm - 6.0 mm)
• Bheka-Thru ishidi liyatholakala
• Ukumboza okumelana ne-AR kuyatholakala
• I-Anti-fog coating iyatholakala